Ilka-Dheere oo Ka Badbaaday Dil iyo Dad Loo Qabtay Falkaas – Radio Daljir
Ilka-Dheere oo Ka Badbaaday Dil iyo Dad Loo Qabtay Falkaas
Galkacyo, Jan 31 ? Taliyaha ciidanka aagga ee daraawiisha Puntland ee gobolka Mudug Maxamed Muuse Ilka-dheer, ayaa maanta ka badbaaday qarax miino oo lala-tilmaameedsaday gaari ay saarnaayeen isaga iyo ilaaladiisa gaarka ahi.
Qaraxaan oo ahaa miinada nooca gacanta laga maamulo, ayaa lagu aasay meel waddo dhinaceed ah oo inta badan gaadiidku ay is-ticmaalaan, isla markaana marin u ahayd taliyaha, mana jirto wax khasaare ah oo qaraxaasi uu gaystay.
Ilaalada taliyaha iyo ciidan bileyska oo isla markiiba gaaray goobta u qaraxu ka dhacay, ayaa gacanta ku dhigay labo nin oo la rumaysan yahay in ay ahaayeen raggii falkaasi fuliyey, sida ay idaacadda Daljir u qaxiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay oo ku dhaw saraakiisha bileyska, waxaana haatan socda baaritaan raggaasi su?aalo lagu waydiinayo.
Taliyaha qaraxa lala-eegtay Maxamed Muuse Ilka-dheere oo ay idaacadda Daljir ay u suurtogashay in ay ka waraysato dhacdadaasi, ayaa sheegay falkaasi in uu ahaa mid fulaynimo ah, ayna ka danbeeyeen rag la soo kiraystay oo calooshood u shaqaystayaal ah.
Md. Ilka-dheere, wuxuu dhinaca kale dadka falalkaasi gaysta ku tilmaamay in ay yihiin, kuwo aan sal raad-toona ku lahayn diinta islaamka, una adeega dano shisheeye, wuxuuna dadka gobolka ku dhaliilay gabbaad-siinta dhagar qabayaasha.
Sikastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horraysay oo sidaan oo kale qarax miino loola bartilmaameedsado mas?uul ka tirsan maamulka gobolka Mudug ee Puntland, waxaana ay ahayd bishaan January gudaheeda xilligii sidaan oo kale uu qaraxa miino ka badbaaday guddoomiayaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad.